Ihe niile na-echegbu Rikoooo
Nke a Forum bụ English naanị. N'ihi na French Rikooo Forum, na-eso nke a njikọ: http: //www.rikoooo.com/fr/forum/
Daalụ na Welcome.
Anyị na-agba ndị ọhụrụ so ịme onwe ha ebe a. -Esi mara ibe ma na-eso gị ọdịmma.
36 Isiokwu 78 mmereonwe
Re: Onye otu ọhụụ
3 ụbọchị 4 awa gara aga
Nwere ụfọdụ nzaghachi na ndenye ịkọrọ?
Atụla ihere na dobe anyị a dee. Anyị chọrọ anụ gị na-agbalịsi ike ime ka anyị na saịtị mma ma ndị ọzọ ọrụ enyi na enyi n'ihi na anyị ọbịa na òtù a ka.
50 Isiokwu 175 mmereonwe
Re: Ezinụlọ A320
1 ọnwa 1 ụbọchị ago
1 Isiokwu 7 mmereonwe
Re: Rikoooo na-achọ onye nrụpụta ọrụ afọ ofufo
3 afọ 6 ọnwa gara aga
Anyị na-ekwu banyere ihe ọ bụla gburugburu anyị ọkacha mmasị ụgbọ elu simulators
Microsoft Flight Simulator 2020 (FS2020) bụ onye na - esote n'ụgbọ njem ụgbọ elu na - ama onye nọchiri Microsoft. FSX. Site na obere ụgbọ elu gaa ndị na-anya ụgbọ elu, site na America gaa Antarctica; can nwere ike ife efe n’ụwa niile n’ime ụgbọ elu kacha eme eme emebere emegharịla nke ọma.
Ka anyị kwuo banyere FS2020!
2 Isiokwu 1 mmereonwe
1 izu 3 awa gara aga
Mmadụ Bịa ka Prepar3D ọrụ
131 Isiokwu 234 mmereonwe
Re: Ntuziaka na-efu na Boeing 727-200 na Live154 FSX & P3D in P3Dv5
4 ụbọchị 19 awa gara aga
Welcome FSX ọrụ
264 Isiokwu 602 mmereonwe
Re: Nzuzo k’onye mmechi
4 ụbọchị 2 awa gara aga
FS 2004 - Narị Afọ nke Flight
Welcome FS2004 ọrụ
13 Isiokwu 23 mmereonwe
Pọt-12 3d vc nje fs9
1 afọ 2 ọnwa gara aga
Mmadụ Bịa ka X-Plane ọrụ
0 Isiokwu 9 mmereonwe
Re: X-Plane Enyemaka
3 ọnwa 3 izu gara aga
Ịkọrọ gị ihe kasị mma simulator screenshots na videos ebe a na anyị.
Ịkọrọ gị screenshots weere na a ụgbọ elu simulator ebe a na anyị.
7 Isiokwu 12 mmereonwe
Calvi - LFKC dị na n'efu na ioslọ Nnyocha ụgbọelu
7 ọnwa 3 izu gara aga
Nke a bụ ebe biputere na videos e gị ụgbọ elu simulator, otú imepụta ihe.
22 Isiokwu 16 mmereonwe
3 ọnwa 4 izu gara aga
Ekwu okwu banyere (fọrọ nke nta) ihe ọ bụla, dị ka ogologo oge dị ka ọ bụ na ọ dịghị ezigbo okwu na adịghị dabara na ndị ọzọ na sub-forums.
Mkparịta ụka zuru oke
Ọ bụrụ na adabaghị ... Ọ dabara ebe a ...
0 Isiokwu 0 mmereonwe Ọ dịghị isiokwu
ada awụ ọsọ n'ugwu
Gịnị ka ị na-ege ntị mgbe na-efe efe?
1 Isiokwu 3 mmereonwe
Gịnị oleekwa ebe ị ofufe taa
Ị na-efe efe ka ebe-akpali, ma ọ bụ na ihe na-akpali gị ụgbọ elu simulator? Mgbe ahụ, na-agwa ya na anyị.
Volleyball Group na AI Flight Planner na Discord (Karịa 70 ụgbọelu) ... GỤỌ
2 afọ 4 ọnwa gara aga
Nke a na ebe a na-ekwu okwu banyere ata ụwa ụgbọelu. -Akpali photos, videos, eziokwu ...
25 Isiokwu 51 mmereonwe
Re: Ejiri igwe (Fim)
2 ọnwa 2 izu gara aga
Ndị ọzọ ụgbọ elu simulators
Ebe ikwu okwu banyere ndị ọzọ dịnụ ụgbọ elu simulators.
Flight Gear ụgbọ elu simulator
banyere FlightGear (No isiokwu)
Digital ọgụ simulator ỤWA
Digital ọgụ Simulator World (DCS World) bụ a free na-play digital n'ọgbọ agha egwuregwu, na-elekwasị anya ịme anwansị nke agha ugbo elu.
1 Isiokwu 0 mmereonwe
DCS usoro Digital ọgụ simulator ỤWA
3 afọ 4 ọnwa gara aga
Égbé BMS "bụ ugbu a gọọmenti aha anyị obodo mod maka mbụ égbé 4.0.
1 Isiokwu 1 mmereonwe
Total ọrụ online: 10 Òtù na 3067 Ọbịa Online
Nénénounou, Savik, WilliamBrydges, adri1986, sacri22, salsa234, aghamanbrent
Akụkọ Mgbe Ochie: Na saịtị Administrator Global onye njikwa oge Onye njikwa oge Machibidoro Onye ọrụ Ọbịa
Total Ọrụ: 195241 | Otu kacha ọhụrụ: mmiri ọgwụ
Total Ozi: 1769 | Isi Okwu: 554
Total ngalaba: 5 | Mkpokọta edemede 18
Taa Open: 0 | Ternyaahụ Mepere: 0
Taa Total Azịza: 0 | Answernyaahụ Azịza ya: 0
Oge ike page: 0.223 sekọnd